SAWIRO:-Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya | SMC
Home WARARKA MAANTA SAWIRO:-Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
SAWIRO:-Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee (AMISOM) ayaa Shahaado Sharaf guddoonsiiyey 32 sarkaal oo booliis ah doorkii ay ka qaateen soo celinta nabadda iyo amniga Soomaaliya.
Saraakiishan oo ka kala socota Ghana, Nigeria, Uganda, iyo Zambia oo dhammeystiray hal sano oo howlo shaqo ah ay ka hayeen Soomaaliya kana hoos shaqeeya AMISOM ayaa la filayaa inay ku noqdaan dalalkooda dhamaadka Febaraayo.
Taliyaha Booliska AMISOM, Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee Booliska (AIGP) Augustine Magnus Kailie, ayaa Sabtidii askarta u qabtay xaflad billado lagu guddoonsiiyey.
AIGP Kailie waxay ku amaaneen inay gacan ka gaysteen xasilinta Soomaaliya iyo awood u siinta qeybta booliska AMISOM inay gutaan waajibaadkooda tababarka,iyo la tashiga ciidamada Booliska Soomaaliyeed (SPF).
Wuxuu sheegay in muddadii ay wadeen howlgalada, saraakiisha booliisku ay gacan ka geysteen dadaallada nabadeed ee caalamiga ah isla markaana ay si toos ah saameyn ugu yeesheen nolosha dadka Soomaaliyeed.
“Mustaqbalka, qaar kamid ah askarta booliiska ee aad tababarteen waxay ku aadi doonaan meelo kale waxayna noqon doonaan nabad ilaaliyeyaashii ugu fiicnaa maxaa yeelay waxay ayay barteen,” ayay tiri Kailie.
Taliyaha Ciidamada booliska AMISOM, ahna kuxigeenka taliyaha booliska (DCP) Rex Dundun ayaa sheegay in 32ka sarkaal ay si aan caadi aheyn u soo qabteen cutubyo ka mid ah howl galka AMISOM ee Soomaaliya.
“Waxaan leennahay saraakiil sharaf leh, oo qaban kara heerkooda ugu sarreeya ee booliska adduunka gudahiisa. Qaar ka mid ah saraakiisha socdaalka waxay mas’uul ka ahaayeen isku dubaridka iyo talinta guud ahaan gobolka, waxayna qabteen shaqo wanaagsan, ”ayuu yiri Dundun.
Kaaliyaha Taliyaha Booliska (ACP) Akaninyene Unaam oo u dhashay dalka Nigeria, oo kamid ah saraakiisha ugu sareysa saraakiisha, ayaa uga mahadceliyay dadka Soomaaliyeed wada shaqeynta ay la leeyihiin.
“Dadka Soomaaliyeed waa dad cajiib ah. Dad kala duwan, dhaqammo kaladuwan, deegaanno kala duwan laakiin waa inaan dhaho iyagu waa kuwo soo dhaweyn leh, soo dhaweyn leh, oo deeqsinimo leh, ”ayuu yiri ACP Unaam.
Kuxigeenka Kormeeraha Booliska (DSP), Busari Tajudeen oo ka soo jeeda Nigeria, ayaa sheegay in sanadka adeegga ee ka hooseeya AMISOM ay sidoo kale ahayd fursad wax lagu barto.
Waxaan ku noqonayaa gurigeyga, ma ahan qaabkii aan ku imid. Waxaan sidoo kale ku arkay isbadal muuqda oo lagu sameeyay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, ”ayuu xusay Tajudeen.
Previous articleKhasaaro ka dhashay weerar ka dhacay Itoobiya
Next articleDHAGEYSO: Wafdi Cadaan Ah Oo Ka Degay Kismaayo & Xogta Laga Helay